Wo busuani bi awu ama woredi awerɛhow anaa? Sɛ saa a, wobɛyɛ dɛn agyina yawdi no ano? Hwɛ sɛnea Bible boaa mmabun mmiɛnsa bi ma wogyinaa saa ɔhaw yi ano.
Mfiase no, na ɛte sɛ nea me papa ti pae no kɛkɛ. Nanso, tipae no yɛɛ kɛse. Enti me maame frɛɛ ambulanse ma wɔbɛfaa no kɔe. Besi nnɛ, meda so ara kae bere a nɛɛsefo no refa no akɔ no. Ná minnim sɛ merenhu me papa bio. Nnansa akyi, me papa nyaa yare bi wɔ ne ntini mu ma owui. Ná madi mfe nsia pɛ.
Mfe pii twaa mu, nanso na meda so ara te nka sɛ meka ho bi na me papa wui. Ɛyɛ a mekae bere a nɛɛsefo no refa no akɔ no, na mibisa me ho sɛ: ‘Ná migyina hɔ reyɛ dɛn? Adɛn na manyɛ ho biribi?’ Sɛ mihu nkwakoraa anaa mmerewa a wɔwɔ yare bi a, mibisa me ho sɛ: ‘Adɛn na wonwui, na me papa deɛ wawu?’ Bere rekɔ so no, me maame boaa me ma mekaa sɛnea mete nka no ho asɛm. Afei nso, yɛn mfɛfo Yehowa Adansefo boaa yɛn paa.
Ebinom ka sɛ, sɛ asɛm bi si na ɛhɔ ara wudi awerɛhow a, ɛnkyɛ na wo ho atɔ wo. Nanso me deɛ, mannya no saa. Midii bɛyɛ mfe dumiɛnsa ansa na meredi m’awerɛhow.
Afotu a mewɔ ma mmofra a wɔn awofo awu ni: “Ka sɛnea wote nka no ho asɛm kyerɛ obi. Sɛ asɛm bi a ɛyɛ yaw to wo na woamfa anhyɛ wo mu, na mmom woka ho asɛm kyerɛ obi ntɛm a, ebia ɛbɛboa wo paa.”
Sɛ metena ase na medwennwene nneɛma a akɔ so wɔ m’asetenam no ho a, ɛyɛ me yaw sɛ me papa nni hɔ. Nanso Bible mu asɛm a ɛwɔ Adiyisɛm 21:4 no kyekye me werɛ. Ɛka sɛ ɛrenkyɛ Onyankopɔn ‘bɛpopa [yɛn] aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio.’
Mede nneɛma pii kae me papa. Ɛtɔ mmere bi a, na me ne no koyi nam. Ɛyɛ nso a yɛkɔtena mmepɔw so gye yɛn ani. Ná ɔpɛ mmepɔw so paa.
Me papa benyaa komayare ma ɛkyɛe kakra; mekae sɛ meyɛ abofra kumaa no, mekɔsraa no wɔ ayaresabea bɛyɛ pɛnkoro anaa mprenu. Nanso na minnim sɛ ne yare no mu yɛ den saa. Bere a midii mfe nkron no, komayare no kum me papa.
Bere a owui no, misui paa. Misui araa ma na me home reyɛ atew, enti na mempɛ sɛ mene obiara kasa. M’asetenam paa deɛ, minnye nni sɛ biribi ayɛ me yaw sen saa da. M’abam bui araa ma na minhu nea menyɛ bio. Ná medɔm mmabun kuw bi wɔ m’asɔre mu. Mfiase no, kuw no yɛɛ sɛ wɔbɛboa me, nanso ankyɛ na wɔtoo wɔn adwenem. Ná m’asɔrefo ka nsɛm bi te sɛ: “Wo papa deɛ, ne bere na aso,” “Nyame na ato nsa afrɛ no.” Ebi nso kaa sɛ, “Saa bere yi deɛ, ɔwɔ soro.” Ná saa nsɛm no ntɔ m’asom. Nanso, na minnim nea Bible kyerɛkyerɛ ankasa wɔ saa asɛm no ho.
Afei me maame fii ase ne Yehowa Adansefo suaa ade. Akyiri yi, me ne me nua kɔkaa ne ho. Yebehuu tebea a awufo wom, ne owusɔre ho awerɛkyekyesɛm a Onyankopɔn de ahyɛ yɛn bɔ. (Yohane 5:28, 29) Nanso Bible mu asɛm a ɛboaa me paa ne nea ɛwɔ Yesaia 41:10 no. Ɛhɔ na Onyankopɔn kaa sɛ: “Nsuro efisɛ meka wo ho. Mma w’ani nnyɛ wo totɔtotɔ, na mene wo Nyankopɔn. Mɛhyɛ wo den. Mɛboa wo.” Bere a meredi awerɛhow na mibehui sɛ Yehowa ka me ho no, ɛkyekyee me werɛ paa, na ɛda so ara kyekye me werɛ.
Bere a na madi mfe nson no, me maame nyaa kokoram ma owui. Da mũ no nyinaa na ɛte sɛ nea mereso dae. Mekae sɛ owuu wɔ fie, na na me nanabarima ne me nanabaa wɔ hɔ. Mekae sɛ na obiara ayɛ dinn. Mekae nso sɛ saa anwummere no, yedii nkosua a yɛakyew. Ná ɛte sɛ nea nkakrankakra me wiase nyinaa redan abutuw no.
Saa bere no m’adwene yɛɛ me sɛ, ɛsɛ sɛ meyɛ me ho te sɛ nea biribiara nsii na ama matumi aboa me nua kumaa no. Enti mekaa m’awerɛhow hyɛe. Ɛde besi nnɛ, sɛ biribi haw me a, mebɔ mmɔden sɛ mede besie. Nanso ɛmmoa me.
Mekae sɛnea Yehowa Adansefo a wɔwɔ yɛn mpɔtam no yii ɔdɔ adi kyerɛɛ yɛn na wɔboaa yɛn no. Saa bere no, na afei na yɛafi ase rekɔ nhyiam wɔ Ahenni Asa so. Nanso yɛkɔ a, asafo no mufo befum yɛn ho te sɛ nea yɛne wɔn abɔ abusua akyɛ. Bɛyɛ afe baako deɛ, menkae sɛ me papa noaa aduan anwummere da; anwummere biara na obi de aduan brɛ yɛn.
Bible mu asɛm baako a ɛyɛ me dɛ paa ne Dwom 25:16, 17. Ɛhɔ no, odwontofo no srɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Dan w’ani kyerɛ me, na dom me, efisɛ mayɛ ankonam, na mayɛ mmɔbɔ. Me koma mu ahohia adɔɔso; gye me fi m’adwennwen mu.” Mabehu sɛ, sɛ wo werɛ how a, ɛnkyerɛ sɛ aka wo nko ara. Onyankopɔn ka wo ho. Wei kyekye me werɛ. Bible no aboa me ma makɔ so abɔ me bra. Afei nso, ɛma mede m’adwene si nneɛma pa so mmom; te sɛ owusɔre ho awerɛkyekyesɛm a ɛwɔ Bible mu no. Mewɔ anidaso sɛ daakye mehu me maame bio wɔ paradise wɔ asase yi so. Mehu no no, na ɔte apɔw paa.—2 Petro 3:13.
Awerɛkyekyesɛm a Bible ka kyerɛ wɔn a wɔredi awerɛhow no, wopɛ sɛ wuhu ho nsɛm pii? Wubetumi atwe “Bere a Obi a Wodɔ No Awu” nhoma no a wuntua hwee. Kɔ www.jw.org/tw, na kɔ NHOMA > NHOMA NE NHOMAWA.